इच्छाराज तामाङको सुन्धारास्थित सिटीसी मल लिलामीमा, कति छ सिटीसी मलको बजार मूल्य ? | आर्थिक अभियान
इच्छाराज तामाङको सुन्धारास्थित सिटीसी मल लिलामीमा, कति छ सिटीसी मलको बजार मूल्य ?
वैशाख २६, काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङको सुन्धारामा रहेको सिटीसी मल लिलामीमा गएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋण नतिरेपछि कोषले धितोमा राखिएको सिटीसी मल लिलामीको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।
८२ हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त मलमा १३२ ओटा सटरहरू निर्माण गरिएको छ । कोषले सबै सटर सहितको भवन लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको हो । जग्गाको क्षेत्रफल मात्रै ६ रोपनी रहेको छ ।
कर्जा चुक्ता गर्न दिएको ३५ दिने सूचनाको समय सीमा सकिदा पनि ऋणी सिभिल स्टेट्स प्रालिका प्रतिनिधि र जमानीकर्ताहरु कोहीपनि ऋणचुक्ता गर्न नआएकोले लिलामीका लागि सम्पतीको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
कोषले गत मंसिर ६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र ऋण नतिरे धितोमा रहेको सिटीसी मल लिलामी गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
इच्छाराज तामाङका अनुसार आजभन्दा डेढ वर्ष अघि नै सिटीसी मलको बजार मूल्य पौने ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।
पछिल्लो एक वर्षमा घरजग्गाको मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पनि यसको बजार मूल्य करीब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ। मल निर्माण गर्न तामाङले करीब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।
त्यतिबेला इच्छाराजले आफूलाई अफ्ठेरो पर्दा सिटीसी मललाई ५ अर्ब रुपैयाँमा सजिलै बेच्न सक्ने र त्यति पैसाले सबै ऋण लाइन लगाएर तिर्न सक्ने बताएका थिए। तर उनले भने जस्तो समय नआउँदै उनी प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिएर जेल चलान भइसकेका छन् ।
सिटीसी मलमा तामाङको ५० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ। यस हिसाबले मलमा उनको स्वामित्व तीन देखि साढे तीन अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ। उनको नाममा अहिलेसम्म पौने ६ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम भइसकेको छ ।
उक्त सबै रकम चुक्ता गर्न तामाङको सिटीसी मलसहित उनको श्रीमती र छोरीका नाममा काठमाडौं भित्रै विभिन्न ठाउँमा रहेका घरजग्गासमेत लिलाम गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
कीर्तिपुरमा मात्रै इच्छाराजको १५ रोपनी जग्गाका साथै २६ हजार वर्गफिटको भव्य बंगलो रहेको छ ।